Hay'adda Miino Baarista ee Qaramada Midoobay (UNMAS) | UNSOM
05:21 - 25 Sep
Hay'adda Miino Baarista ee Qaramada Midoobay (UNMAS) waxaa sharciyadda siiyay Golaha Guud, waxa uuna u xilsaaray isku dubbaridka hawlaha miinooyinka ee Qaramada Midoobay. Hay'adda waxa ay ka jawaabtaa codsiyada caawimaadda ee saraakiisha sarsare ee QM iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxa ayna hirgelisaa waajibaadka uu faro Golaha Ammaanka ee la xiriira hawlaha nabadgelyada. Marka laga soo tago waaxaha fuliya hawlgallada nabadda ee lagu fangareeyo miisaaniyada caadiga ah iyo midda kabista, UNMAS waxa ay barnaamijyo ka fulisaa aagagga aan martigelineyn hawlgallada nabadda, iyada oo adeegsaneysa tabarucaadda Sanduuqa Maalgelinta Ikhtiyaariga ah ee lagu kaabo hawlgallada miinooyinka. UNMAS sidoo kale waxa ay maamushaa ilaha dhaqaale ee ka baxsan miisaaniyadda, si loo dardar geliyo gaarsiinta adeegyada goobaha laga fulinayo hawlgallada nabadda.
Sharciyadda iyo Waajibaadka
Maadaama ay tahay hay'ad gaar ah oo hoos tagta Qaramada Midoobay, UNMAS waxay ka shaqeyneysaa sidii loo ciribtiri lahaa halista ka imaaneysa miinooyinka, haraadiga walxaha qarxa ee dagaalka iyo dhammaan aaladaha qaraxyada iyadoo maareyneysa hawlaha miino baarista ee Qaramada Midoobay, taas oo horseedeysa fulinta hawlgallada heer dal, iyo sidoo kale taageeridda sameynta ama dejinta halbeegyada, siyaasadaha, iyo dhaqan-soo-jireenka.
UNMAS waxaa lagu sharciyeeyay qaraarka Golaha Ammaanka ee UNSCR 2461 (2019), 2498 (2019) iyo UNSCR 2550 (2020), waana waax isku-dhafan oo ka tirsan Hawlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM), kaas oo siyaasad istiraatiijiyadeed iyo talooyin farsamo siiya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo ciidammada amniga Soomaaliya.
Markale ayaa UNMAS sharciyadda loogu kordhiyay qaraarkii Golaha Ammaanka ee tirsigiisu ahaa UNSCR 2568 (2021), iyadoo laga dhigay qeyb ka mid ah Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS), kaas oo AMISOM ka taageera xagga saadka. Intaas waxaa dheer, UNMAS waxay maqaam gaar ah ku leedahay Kooxda Qaramada Midoobay ee Wadanka u qaabilsan isku dubbaridka hawlaha bani'aadamnimada iyo miino baarista Soomaaliya taas oo hoos tagta dalladda Kooxda Ilaalinta Caalamiga ah.
Tobanaan sano uu dalku ku jiray dagaallo sokeeye iyo iskahorimaadyo hubeysan waxaa ka dhashay halista walxaha qarxa, sida miinooyinka dhulka lagu aaso, hubka khatarta badan iyo noocyada kala duwan ee haraadiga walxaha qarxa ee dagaalka. Arrintaan halista ah waxay khatar weyn ku gelisay dadka deegaanka, iyadoo saameyn xun ku yeelatay geedi socodka nabadeynta iyo hawlaha dowlad dhiska ee Soomaaliya. Intaas waxaa dheer, adeegsiga aaladaha qarxa, oo ah hubka ay doorbidaan kooxaha hubeysan, waxay gacan ka geysatay amni darrada iyo nabadgelyo-xumada ay keeneen isku dhacyada jira.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, kooxaha hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda waxay u adeegsanayeen walxaha qarxa hub ay kula dagaalamaan Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), taas oo saameyn xoog leh ku yeelatay dadka rayidka ah iyadoo khasaarihii ka dhashay uu gaaray in ka badan 50%. Marka laga soo tago halista walxaha qarxa, hubka cul-culus, iyo haraadiga walxaha qarxa ee dagaalka iyo miinooyinka dhulka lagu aaso waxa ay khatar baaxad leh ku hayaan nolosha dadka rayidka ah taasoo caqabad ku ah xasilloonida iyo nabadda dalka oo dhan.
Khatarta walxaha qarxa waxaa kaga sii daraya iyadoo ay sii kordhayaan dadka soo noqonaya iyo barakacayaasha gudaha ku qaxaya sababo la xiriira dagaallada iyo masiibooyinka dabiiciga ah. Waxaa kale oo la filan karaa in xaaladaha murugsan oo ay kamid tahay abaaraha daba dheeraada iyo fatahaadaha ka dhaca Soomaaliya ay qeyb ka qaadato kororka dadka ku barakacaya gudaha kuwaas oo laga yaabo inay degaan goobo leh halista aaladaha qarxa taas oo horseedaysa nabadgelyo-xumo dheeraad ah, sidaas darteed dadaal xoog leh ayaa loo baahan yahay si loo yareeyo khataraha ka imaaneysa walxaha qarxa.
Hay'adda Miino Baarista ee Qaramada Midoobay (UNMAS) waxay howlaheeda ka billowday Soomaaliya sannadkii 2008, iyadoo ay markaa socdeen dagaallo ba'an iyo xasillooni-darro sii kordheysa marba marka ka dambeysa, waxayna utimid si ay hoos ugu dhigto khatarta iyo saameynta xun ee ka dhalata walxaha qarxa. Sanadihii la soo dhaafay UNMAS waxay ballaarisay hawlgalladeeda, iyadoo ka shaqeyneysay taageeridda qorshaha kala-guurka ee heer Federaal iyo heer Dawlad-goboleed si ay caawimaad ugu fidiso ciidammada amniga ee uxilsaaran la dagaallanka iyo ciribtirka aaladaha qarxa.
UNMAS waxay ka qeyb qaadataa hirgelinta Yoolalka Horumarka Waara (SDGs), iyadoo xaqiijineysa mabaadi'da aasaasiga ah ee 'inaan cidna laga tagin' si waafaqsan Ajendaha 2030. UNMAS waxay muhiimadda siineysaa in mashaariicda loogu talagalay yareynta khasraaraha ka dhasha halista walxaha qarxa la gaarsiiyo daafaha dalka, si ay u ilaaliso waajibaadka loo igmaday islamarkaana udhiirri geliso geeddi socodka dadaallada ay hormuudka uyihiin Soomaalida.
Taageeridda Ciidamada Amniga ee Soomaaliya: UNMAS waxay talo, tababbar, iyo qalab siineysaa Ciidanka Booliska Soomaaliyeed (CBS) iyo Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (CXDS) si ay udardar geliyaan ka hortagga khatarta walxaha qarxa iyo saaridda miinooyinka ee guud ahaan gayiga Soomaaliya. Kor uqaadista taageerada iyo awood dhiska noocan oo kale waa muhiim, gaar ahaan marka loo eego wareejinta tartiib tartiibta ah ee masuuliyadda amniga AMISOM iyadoo lagu wareejinayo Ciidamada Amniga ee Soomaaliya . UNMAS waxay kaloo ka gacan siineysaa Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) maamulka hubka iyo rasaasta si waafaqsan waajibaadka ciqaabeed ee ku xusan cunaqabateynta hubka ee qeyb ahaanta la qaaday. Laga soo billaabo 2018, in ka badan 1,062 saraakiil booliis ah ayaa la siiyay tababbar ku saabsan wacyigelinta aaladaha qarxa, sidoo kale in ka badan 891 shaqaale ayàa si gaar ah loogu tababbaray si waxku'ool ah la tacaalida khataraha walxaha qarxa oo ay kamid yihiin aaladaha qarxa. Laga soo billaabo Janaayo 2021, UNMAS waxay tababbar ku saabsan Yareynta Khatarta ka Dhalata Aaladaha Qarxa siineysay CXDS si la jaanqaadeysa ka bixitaanka tartiib tartiibta ah ee AMISOM iyo ku wareejinta buuxda ee arrimaha la xiriira amniga Dowladda Soomaaliya. 45 sarkaal oo ka tirsan CXDS ayaa helay tababbarka Yareynta Khatarta ka Dhalata Aaladaha Qarxa tan iyo bishii Nofeembar 2020 halka 99 kalena ay hadda qaadanayaan.
Taageeridda Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM): UNMAS waxay taageero ku saabsan yareynta halista walxaha qarxa siisaa ciidamada AMISOM ee ka kala socda dalalka Burundi, Jabuuti, Itoobiya, Kenya, iyo Uganda. Si loo yareeyo halista ka dhalan karta walxaha qarxa ee ka dhanka ah shaqaalaha iyo hantida AMISOM, UNMAS waxay tababbaraysaa islamarkaana ay hageysaa ciidammada Saarista Qaraxyada iyo yareynta khatarta walxaha qarxa, sidoo kale waxay talo ka siinaysaa hababka qorshaynta hawlgalka, isticmaalka qalabka iyo adeegyada gaarka ah taas oo loogu gol leeyahay xoojinta amniga ciidamada iyo dhaqdhaqaaqooda. Tan iyo billowgii sanadkii 2018, UNMAS waxay tababbar siisay in kabadan 37,189 oo ka tirsan hawl wadeennada AMISOM iyadoo la siiyay tababbaro lagu dhisayay kartidooda baarista iyo saarista aaladaha qarxa iyo yareynta halista ka dhalan karta.
Maareynta Qaraxyada Si Bani'aadanimo ah si loo gaaro xasillooni: UNMAS waxay taageero ufidisaa dadka rayidka ah ee ku deggan aagagga laga filan karo khatarta walxaha qarxa, sidoo kale waxa ay isku dubbaridaa hawlaha bani'aadamnimada ee la xiriira miinooyinka, sida sahminta, ka takhalusidda miinooyinka iyo wacyigelinta ku saabsan walxaha qarxa. Laga soo billaabo 2015, UNMAS waxay gacan ka geysaneysay horumarinta dadaallada ay hormuudka uyihiin dadka rayidka ah ee lagu nadiifinayo miinooyinka iyo haraadiga walxaha qarxa ee xadka Soomaaliya la wadaagto Itoobiya. Intaas waxaa dheer, UNMAS waxay kala shaqeyneysay Hay'adaha Soomaalida sidii loo sameyn lahaa qorshe qaran oo lagu caawinaayo dhibbanayaasha iyo dadka ka badbaaday khataraha walxaha qarxa si kor loogu qaado awoodda xarumaha lagu daryeelo islamarkaana lagula tacaalo dadka ka badbaaday halista qaraxyada. UNMAS iyo Hay'adda Maareynta Miinooyinka iyo Walxaha Qarxa ee Soomaaliya (SEMA) waxay soo gabagabeeyeen sahan ay sameeyeen 2018/19, kaddibna waxa ay diyaariyeen Qorshe-hawleed Qaran si loo xaqiijiyo baahiyaha iyo xuquuqda dadka naafada ah iyo dhibbanayaasha kale ay saameeyeen khatarta walxaha qarxa ee Soomaaliya. Sannadkii 2020, UNMAS waxay nadiifisay dhul ay baaxaddiisu la egtahay 771,940 mitir laba-jibbaaran oo ku teedsan xudduuda udhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya, kaas oo loogu talagalay ilo dhaqaale oo kala duwan sida daaqsin, deegaan ay ku noolaadaan xoolaleyda, iyo waddo nabdoon oo isku xirta tuulooyinka iyo biyo fariisinnada.
La shaqeynta Deeq-bixiyayaasha iyo Saaxiibbada Caalamiga ah
UNMAS waxay la shaqeysaa dhowr hay'ado iyo mashaariic kala duwan iyadoo taageero ka heleysa deeq-bixiyeyaasha iyo saaxiibbada caalamiga ah, waxaana kamid ah kuwa soo socda:
iyadoo kaashaneysa SEMA, UNMAS waxay billoowday inay bixiso wacyigelin ku aaddan Khatarta Walxaha Qarxa, sidoo kale inay gudbiso farriimaha wacyi gelinta COVID-19 iyadoo loo marayo isticmaalka qalabka cadceedda ku shaqeeya ee loogu talagalay wacyigelinta xaaladaha halista ah kaas oo loo yaqaanno Riska Esucation Talking Device (RETD), si looga caawiyo caruurta iyo dadka saboolka ah inay helaan farriimaha wacyigelinta iyo badqabka.
UNMAS waxay sidoo kale waxay kala shaqeeysaa UNICEF iyo UNDP yaraynta khatarta qaraxyada ee ka jirta Soomaaliya. Hannaanka 'One UN' waxaa si wadajir ah ufuliya saaxiibbada caalamiga ah si ay ufududaato in dadka la gaarsiiyo fariimaha la xiriira Wacyigelinta Walxaha Qarxa iyo xoojinta awoodda hay'adaha dowladda si waarta. Sannadkii 2020, UNMAS waxay farriimaheeda wacyigelinta gaarsiisay dad gaaraya 62,532 qof, kuwaas oo ay ku jiraan caruurta dhigata iskuullada, dadka barakacayaasha ah, macallimiinta iskuullada, guddiyada wacyigelinta bulshada iyo bulshada martida loo yahay ee ku nool deegaannada gobolka Banaadir iyo maamul goboleedka Jubaland.
Iyadoo kaashaneysa laanta Midowga Yurub ee Soomaaliya, UNMAS waxay taageereysaa hannaanka awood-dhiska ee Dowladda Soomaaliya iyo Bulshooyinka, waxayna hubineysaa in si waxku'ool ah loo fuliyo hawlgallada miino baarista. UNMAS sidoo kale waxay hawlgallo miino baaris ah iyo wacyigelin ku saabsan walxaha qarxa ka sameeneysaa maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland iyadoo shaqaalaysiinaysa dadka Soomaaliyeed ee deegaanka ah si ay u qabaro hawlgallo una abuurto shaqooyin.
iyadoo bah wadaag la ah Dowladda Japan, UNMAS waxay gacan ka geysataa taageerada awood-dhiska ee Dowladda Soomaaliya si ay isugu dubbarido ugana jawaabto halista ka imaaneysa aaladaha qarxa iyadoo loo marayo barnaamijyo isugu jira olole, tababbar, iyo wacyigelin.
Wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan UNMAS, fadlan booqo xiriirradan soo socda:
Eeyaha Qaraxyada Garta (EDD):
Agabka Hadla ee Baraarujinta Halista Miinooyinka (RETD):
Baraha Bulshada iyo Webka
Mareegaha Dheeraadka ah: